भोट हाल्न जाँदा मोबाइल साथमा लैजान पाइन्छ कि पाइदैन त ? - Mitho Khabar
भोट हाल्न जाँदा मोबाइल साथमा लैजान पाइन्छ कि पाइदैन त ?
May 12, 2022 mithokhabarLeaveaComment on भोट हाल्न जाँदा मोबाइल साथमा लैजान पाइन्छ कि पाइदैन त ?
काठमाडौं । आउँदो शुक्रबार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन । बिहान सात बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म चल्ने मतदानका लागि मौन अवधिमा चुनाव प्रचारको कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न निर्वाचन आचार संहिताले रोक लगाएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिताले निर्वाचन तथा मतदानको समयमा कतिपय विषयमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई होच्याउने, एउटा उमेदवारको फोटोलाई अर्को उम्मेदवारको फोटोमा जोड्ने, सामाजिक सञ्जालमा चुनाब भड्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था गरिएका छन् ।
त्यतिमात्रै नभएर निर्वाचन आचार संहिताले मतदान केन्द्रमा जाँदा अपनाउनु पर्ने केही प्रावधानहरू पनि तोकिदिएको छ । यस्तोमा धेरैलाई मतदान केन्द्रमा जाँदा मोबाइल लैजान पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने दुबिधा पनि हुनसक्छ । किन भने आफूले हालेको मतपत्रको फोटो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने चाहना कतिपयलाई हुनसक्छ ।
तर, निर्वाचन आचार संहिताले भने त्यस्ता क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्थानीय निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ अनुसार केन्द्रमा मतदान गर्न स्वीकृत पाएको व्यक्तिले साथमा मोबाइल, क्यामेरा जस्ता कुनै पनि फोटो खिच्न सकिने उपकरण बोकेर जान नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
जहाजभित्र महिलाका अगाडि ४ पटक हस्तमैथुन गरेपछि…
काठमाण्डौ छाड्न जडिबुटी चोकमा भेला भएकालाई घर जान दिइएन